कहिलेसम्म निमित्त हो मन्त्रीज्यू ?
11th July 2020, Saturday
काठमाडौं । मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूले असक्षमताका कारण कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतका थुप्रै निकाय निमित्तको भरमा चल्दै आएका छन् । चक्रपाणि खनाल मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै अधिकांश बोर्ड र संस्थानहरू निमित्तले हाँकिरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) करिब डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । कहिले कायममुकायम र कहिले निमित्तका भरमा सो संस्था चल्दै आइरहेको छ । अहिले डा. टेकबहादुर गुरुङले निमित्त पाएका छन् । कामु पाएका डा. गुरुङको अवधि सकिएपछि उनले निमित्त चलाइरहेका हुन् । कुनै कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी कामु दिन नपाइने भएको हुँदा सो अवधि गुज्रिएपछि डा. गुरुङले नाकर्को निमित्त चलाइरहेका हुन् ।
डेढ वर्षअघि नै डा. वाईआर पाण्डेको पदावधि सकिएपछि डा. वैद्यनाथ महतोले कामु चलाएका थिए । उनको पनि अवधि सकिएपछि डा. गुरुङले कामु पाएका हुन् । तर, पछिल्लो समय भने नार्कको कार्यकारी–निर्देशकमा बन्न केही कर्मचारीहरूले रुचि देखाएका छन् । त्यसमा बाली तथा बागवानी महाशाखा सम्हालिरहेका मुख्य वैज्ञानिक डा. दीपक भण्डारी, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सीताराम अर्याल, योजना महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र लेखाका प्रमुख रामबहादुर केसीको रुचि रहेको बताइन्छ ।
दुग्ध विकास संस्थान त करिब दुई वर्षदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । दुई वर्षअघि डा. गंगा तिमल्सिनाको अवधि सकिएपछि डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारीले निमित्त पाएका थिए । डा. अधिकारीको पनि अवधि सकिएपछि ईश्वरी न्यौपानेले निमित्त चलाए । न्यौपानेको पनि जागिरको अवधि सकिएको हुँदा अहिले वित्तीय विभागका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार घिमिरले निमित्त चलाइरहेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पद पनि गएको वैशाखदेखि रिक्त छ । शेषकान्त गौतमको अवधि सकिएपछि सो पद रिक्त रहेको हो । तर, सो पदका निम्ति केही व्यक्तिले दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । दौडधुपका क्रममा रमेश गुरागाईं अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्छ । तत्कालीन कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलको स्वकीय सचिव रहेका गुरागाईं अहिलेसम्म दौडमा अगाडि रहेको बुझिएको छ । तर, गुरागाईंसँग चिया तथा कफी क्षेत्रको अनुभव भने नरहेको र मन्त्री खनालले भने सोही क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाए पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
यसरी नै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पनि निमित्तकै भरमा सञ्चालित हुँदै आएको छ । सो कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैरको अवधि सकिएपछि अच्यूत पौडेलले निमित्त चलाइरहेका छन् । उनले निमित्त चलाएको लामै समय बिते पनि अहिलेसम्म नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्ति गर्नेतिर मन्त्रालयले कुनै चासो र तत्परता देखाइरहेको छैन ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि अहिले खाली नै रहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक खाली भएको करिब दुई वर्ष बिते पनि कसैलाई नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कैलाश ढुंगेलले रामेछापबाट निर्वाचन जितेर प्रदेश ३ को आर्थिक मामिलामन्त्री भएपछि सो पद त्यही समयदेखि खाली रहँदै आएको हो ।
के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ?
नेकपा विवादको बाछिटा संसद्मा
वामदेवलाई रोक्न ईश्वर सक्रिय
१४ रोपनी जग्गा अझै कन्टिनेन्टलकै कब्जामा
ईश्वरको ‘हिरो’ हुने रहर
चौरजहारीमा दुई सल्लाहकारबीच झन्डै…
जो मन्त्री आए पनि यामकुमारीबाट धुरुक्कै
रक्षामन्त्री कि सेनापतिको तामेलदार ?
प्रचण्डसँग बादलको दूरी बढ्दै
मन्त्रीको अभियान ः नेकपा मास्ने, भ्रष्ट च्याप्ने
तानातानमा समाजकल्याण परिषद्
कार्यकारी भुमिकाको खोजी
डाटा सेवाको अवधी थप
चैत २७, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण मुलुकमा कायम रहेको लकडाउनको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराएको स्टे कनेक्टेड अफरको अवधि थप गरेको छ । नेपाल सरकारले तेश्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि कम्पनीले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी...